Galmudug oo amar ku soo rogtay goobaha waxbarashada | KEYDMEDIA ONLINE
Galmudug oo amar ku soo rogtay goobaha waxbarashada
Maamulka Galmudug ayaa ku dhawaaqay in muddo kooban la hakinayo wax barashada degaanada maamulkaas, lana xirayo guud ahaan goobaha wax lagu barto ee Galmudug.
DHUUSAMEREEB, Soomaaliya – Wasaaradda Waxbarashada maamulka Galmudug ayaa ku dhawaaqday in la xirayo goobaha waxbarashada ee degaanada maamulkaas, sabab la xariirta faafitaanka cudurka faafa ee Coronavirus.
Waxaa la xiray guud ahaan goobaha Waxbarashada Galmudug, Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay, Wasaaradda Waxbarashada Galmudug, laga bilaabo maanta oo bisha Maarso tahay 10, kuna eg 18-ka bishaan, si looga hortego faafida Cudurka.
“Wasaaraddu waxa ay talaabadaan qaadeysaa kadib markii ay garwaaqsatay xaddiga faafidda muujadda labaad ee caabuqa COVID-19”. ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda.
Kadib talooyin ka yimid gudigga loo xil-saaray ka soo tala-bixinta hababka lagu yareyn karo faafitaanka cudurka Covid-19, ayaa lagu amray bahda waxbarashada Galmudug inay u hoggaansamaan.
Wasaaradda Caafimaadka Galmudug ayaa shalay shaacisay in qofkii ugu horeeyay uu Magaalada Dhuusamareeb ugu dhintay COVID-19, waxaana saacadihii lasoo dhaafay laga diiwaan-geliyay halkaas 24 qof oo 7 kamid ah yihiin shaqaalaha Wasaaradda Waxbarashada.